FANDAVANA FIHIBOHANA : Nihoa-pefy ny mpitari-posy, nirefotra ny lakrimôzena polisy iray naratra voatora-bato
Nafana ny zava-misy tao Toamasina ny andron’ny alakamisy 26 marsa lasa teo. Manoloana ny tsy fahazoan’izy ireo miasa, dia nanatanteraka fitokonana izay niafara tamin’ny fanararaotana ireo mpitondra posiposy bisikileta ao an-toerana. 27 mars 2020
“Aleonay matim-basy sy ny valanaretina toy izay matin’ny hanoanana”, io no antsoantson’izy ireo mitaky ny fahazoana miasa indray. Nilaza ireto mpitondra posiposy ireto fa tsy misy asa ambany ka mendrika mahazo fanampiana avy amin’ny mpitondra fanjakana sahala amin’ny ho azon’ireo mpivarotena. Na izahay avela miasa na izahay omena fanampiana, hoy hatrany ireo jokera posiposy.
Niafara tamin’ny tora-bato ny hetsika. Vokany, polisy iray miasa ao amin’ny boriborintany faharoa ao Tanambao II no vaky loha vokatry ny toraka nahazo azy. Mpanao gazety iray ihany koa no voatora-bato saingy mbola afa-niala ka tsy naratra. Nisy tamin’ireo andian’olona sasany mpanararaotra no efa niroso tamin’ny famakiana magazay. Nafana ny fidirana an-tsehatra nataon’ny Emmo-Sécurité ka voafehy ny tranga niseho.
Teny amin’ny faritra Verrerie iny no tena nisehoan’izany sakoroka izany. Tamin’ny fotoana nanoratanay ny lahatsoratra (alakamisy hariva), dia efa milamindamin-dratsy ny ao Toamasina. Fantatra ihany koa fa tonga nanatitra taratasy tao amin’ny Kaominina misy ny lisitr’ireo mpamily tuc-tuc ao Toamasina ny fikambanamben’ny mpamily tuc-tuc ao Toamasina, ny alakamisy lasa teo. Ny antony, dia tsy miasa ny tuc-tuc noho ny fitokana-monina manoloana ny valanaretina coronavirus ka miandrandra fanampiana avy amin’ny Fanjakana foibe ireo mpamily.